कस्तो हुँदो रहेछ ‘लकडाउन’ भन्दै सडकमा मान्छेको ओइरो, आफ्नै स्वास्थ्यमा किन यस्तो बेपर्वाह…? « Etajakhabar
कस्तो हुँदो रहेछ ‘लकडाउन’ भन्दै सडकमा मान्छेको ओइरो, आफ्नै स्वास्थ्यमा किन यस्तो बेपर्वाह…?
प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७६, बिहीबार २०:०४
यहाँको कालिकास्थान–मैतिदेवीको भित्री सडकमा बुधबार साँझ मानिसको भिड बाक्लो थियो । कतिपय मानिस खाद्याह्न र तरकारी खरिदमा झुम्मिएका थिए । कतिपय रमाइलो हेर्न आएका थिए । “कस्तो हुँदो रहेछ बन्द भनेर निस्केको पुरै ठप्पै रहेछ”, युवा आपसमा कुरा साट्दै थिए । समुह–समुहमा मानिसको जमघट थियो । कोठा भित्र बस्दा वाक्क लागेर बाहिरी अवस्था हेर्न निसिकएका भन्नेहरु पनि भेटिए । दिनभर सुरक्षा अवस्था चुस्त देखिए पनि साँझ सडकमा सवारीको चाप केही बढेको पाइन्थ्यो ।
काठमाडौँको अनामनगरस्थित ग्यास स्टोरमा ग्यास लिन लामबद्ध भएर बसेका सर्वसाधारण । नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिन आइतबार १७ स्थानबाट ग्यास वितरण गरेको छ । तस्वीर ः रोशन सापकोटा
गएको डिसेम्बर ३१ मा पहिलो पटक चीनको उहानबाट शुरु भएको कोभिड–१९ को सङक्रमण यूरोप अमेरिका हुँदै विश्वका १९८ मुलुकमा फैलिसेको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा कोरोनाका कारण मानिसको मृ’त्य समेत भइसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले आजको मितिसम्म त्यो स्थिति व्यहोर्नुपरेको छैन । तीन जनामा भाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएको छ । तीनै जना विदेशबाट आएका हुन् ।
इटली र स्पेनमा कोभिड–१९ कै कारण केही दिन अघिसम्म दैनिक सयौँ व्यक्तिको निधन भएको विवरण छ । इटालीमा सरकार होस् या नागरिकले बेलैमा सावधानी नअपनाउँदा स्थिति भयावह बन्न पुगेको समाचार आइरहेका छन् । चीनले तत्कालै सम्बन्धित प्रान्तलाई लकडाउन गर्दा उसले क्षति कम बेहोर्नुप¥यो । त्यसैको पाठ सिकेर नेपाल सरकारले पूर्व सावधानी स्वरुप अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको हो । विश्वाका धेरै मुलुक अहिले यही प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् ।
आज प्राप्त विवरण अनुसार विश्वका १९८ मुलुकमा झण्डै पाँच लाख मानिस उक्त रोगबाट प्रभावित भइसकेका छन् । त्यसमध्ये २१ हजार ३०० बढीको निधन भइसकेको छ । एक लाख १४ हजार उपचारपछि फर्किसकेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म तीन हजार २८७ जनाको निधन भएको छ । त्यसको दोब्बर बढी इटलीमा सात हजार ५०० को निधन भइसकेको छ । स्पेनमा तीन हजार ६०० को ज्यान गईसकेको छ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको संख्या एक हजार नाघिसकेको छ ।